I-Clifton 1st Beach Studio - I-Airbnb
I-Clifton 1st Beach Studio
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Adrian
U-Adrian Ungumbungazi ovelele
Leli fulethi elihle le-studio elihlanganisiwe linikeza konke okudingwa umuntu eholidini. Hlala uwela umgwaqo ukusuka eClifton Beaches edumile. Ngaphandle nje kunesitobhi sebhasi 'yebhasi leDolobha Lami' okuyizithuthi zomphakathi zayo yonke imizila emikhulu. Abavakashi bayakujabulela ukusebenzisa lesi sithuthi njengoba sidambisa izinkinga zokuthola indawo yokupaka ngezikhathi zonyaka eziphakeme kakhulu. Kungenjalo i-Uber isetshenziswa kakhulu eKapa. I-Street Parking kuphela.
Ifulethi le-studio elibanzi elinekhishi elihlome ngokuphelele, ishawa enkulu endlini yokugezela kanye nevulandi elihle elingaphandle le-allfresco yokudlela. Yize ingekho i-TV yekhebula, iNetflix icushiwe ukuze kubukwe uchungechunge lwe-TV namamuvi. Indawo eningi yekhabethe. Umshini Wokuwasha kanye ne-Tumble dryer kufakwe ekhabetheni elilodwa. Inkonzo yokuhlanza nsuku zonke ngesicelo ngenani lama-R300 ngosuku.
Ngaphesheya komgwaqo osuka emabhishi adumile aseClifton.
Ngakolunye uhlangothi uhambo olufushane luzokuthatha udlule eClifton Beaches uze ufike endaweni yamaholide ethandwayo eCamps Bay, ehlinzeka ngazo zonke izinsiza zakho, odokotela, osokhemisi, izitolo kanye nezindawo zokudlela ze-vibey nezindawo zokudlela. Ngakolunye uhlangothi ukushayela okufushane noma ukuhambahamba okude kancane kuzokuyisa e-Sea Point, enikezela ngenqwaba yezindawo zokudlela kanye ne-promenade edume kakhulu. Indawo engasemanzini iwuhambo lwemizuzu eyi-10 kuphela, kulapho uzothola khona zonke izitolo ezidumile, imisebenzi yezivakashi/uhambo/uhambo kanye nehhovisi lemininingwane yezivakashi kanye nezindawo zokudlela ezinhle.
IClifton inamabhishi AMANE amahle ngawodwana okuthi phakathi nezinyanga zasehlobo (phakathi kuka-Okthoba no-April) agcwale abantu bendawo nabakhi bamaholide ngokufanayo. Amatshe amakhulu, egwadule ahlukanisa amabhishi nezitezi eziwumngcingo ezinezitebhisi eziwumqansa zinikeza ukufinyelela kwawo kuphela. Amabhishi ase-Cliftons awadumile nje kuphela ngoba ayamangaza kodwa futhi ngenxa yokuthi ngokuvamile yiwona avikeleke kakhulu emabhishi lapho lelo zwe elishisayo eningizimu-mpumalanga linquma ukuvunguza. Futhi aphethwe abaqaphi abaqeqeshiwe ngesikhathi sesizini ephezulu. Ibhishi ngalinye linesimo esihlukile futhi uma kuziwa ekunqumeni ukuthi yiluphi ulwandle ongalukhetha, kuyasiza ukwazi okwengeziwe kancane ngalo. (yize noma iyiphi yazo ingaba yinhle kakhulu epikinikini yokushona kwelanga)
4.72 out of 5 stars from 188 reviews
4.72 · 188 okushiwo abanye
I-Clifton iyidolobha elinokuthula nezindawo zokuhlala, nokho useduze kakhulu ne-Sea Point ejabulela i-cosmopolitan vibe yamahora angu-24 edonse inqwaba yezikhulu zedolobha ukuthi zizinze ezindaweni eziphakeme ezingasogwini. I-Sea Point ihlukaniswe ngu-Main Road, enezitolo eziningi, izindawo zokudlela, izindawo zokudlela, amakilabhu nama-coffee bars. Cishe yonke into oyidingayo itholakala kule ngxenye yedolobha futhi inomsindo ngomsebenzi.
Phezulu emithambekeni ye-Signal Hill, kude noLwandlekazi i-Atlantic, kukhona izindlu ezinkulu ezizimele ezingenisa izigidi ngemibono yazo kanye nokuba seduze kwenkaba yeKapa. Ngakolunye uhlangothi, ujenga lomgwaqo odumile wase-Sea Point odonsa abantu bendawo nezivakashi ezihamba ngezinyawo nokugijima noma ukubuka nje abantu, kukhona okunethezeka kwasebhishi lase-Sea Point kanye nezindlu zokuziphekela - ezithandwa yintsha nemfashini noma labo abanemindeni emincane. Indawo ehamba ngezinyawo ithatha ubude bendawo engasebhishi ye-Sea Point, ukusuka e-Bantry Bay kuya e-Mouille Point futhi iyisizinda somsebenzi, ikakhulukazi ekuseni noma ntambama ukuze ubuke ilanga lishona khona kanye emanzini e-Atlantic Seaboard.
Idlanzana lamapaki ezingane agijima eduze kwe-promenade futhi kukhona i-swimming pool ene-chlorinated etendeni. Ukufika emabhishi ase-Clifton naseCamps Bay ayisimo esikahle futhi asazobonakala kulula ukuhamba ngezinyawo noma ukushayela, futhi inkaba yedolobha kanye ne-V&A Waterfront kukude ngemizuzu.
Ngiyimizuzu eyi-10 kuphela ukusuka lapho futhi ngizotholakala noma nini ocingweni lwami noma nge-imeyili noma nge-Airbnb. Futhi ngingumthengisi wezindlu osebenza ngokukhethekileyo e-Atlantic Seaboard, ngakho-ke uma ufisa ukubheka indawo ethengiswayo, ngingathanda ukuba usizo.
Ngiyimizuzu eyi-10 kuphela ukusuka lapho futhi ngizotholakala noma nini ocingweni lwami noma nge-imeyili noma nge-Airbnb. Futhi ngingumthengisi wezindlu osebenza ngokukhethekileyo…
UAdrian Ungumbungazi ovelele